၂။ ၀င်စေ……………. ထွက်စေ……………….. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ၂။ ၀င်စေ……………. ထွက်စေ………………..	9
၂။ ၀င်စေ……………. ထွက်စေ………………..
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 16, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary |9comments
” ခြေတစ်လှမ်း အကွာက သူတို့နေရာ “(အပိုင်း ၂)
မှတ်ပုံတင်ပါရင် မြန်မာ့လ၀ကရှေ့မှာတန်းစီ မှတ်ပုံတင်ပြ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး
အဲဒီကဒ်လေးကိုယူ တရုပ်ပြည်ထဲကိုဝင်တဲ့ အဆောက်အဦထဲကိုဝင်လိုက်ပါ။
ကျနော်တို့ မြန်မာတွေက တော့ ရှေ့လူနဲ့နောက်လူ ဇွတ်ကပ်ထားကြတာပါဘဲ။
“တန်းစီ ” တို့ “စာအုပ် “တို့ ကို ဗမာစကားမပီမသနဲ့တောင်းမယ်။
မျက်မှန်တွေ ဦးထုတ်တွေချွတ်မထားရင် တရုတ်လိုပြောမယ်။
အပြောခံရသူက တရုတ်စကားမတတ်တော့ ဘာပြောနေတာမှန်းမသိလို့
(အသားလွတ် အော်ရင် ဆူရင် တိုင် လို့ရတယ်ပြောပါတယ်)
သူတို့မျက်နှာတွေကတော့ မရယ်မပြုံး ဖော်ရွေမူ့မရှိ။
ဒါပေမယ့် ၀င်လာသူထံက လည်း ဘာမှ ရယူလိုမူ့မရှိ။
သူတို့အချင်းချင်း စကားပြောနေရင်းက နေ ကွန်ပြူတာကို တဂျောက်ဂျောက်နှိပ်မယ်။
ပြီးရင် ကဒ်အစိမ်းပေါ် ဒါမှ မဟုတ်စာအုပ်ပေါ်ကို တံဆိပ်တုံးထုပြီးရင်
ပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင်လဲ အထွက်ပေါက်မှာ အခုလိုဘဲတန်းစီ။
တရုတ်လ၀က ဘက်က အထွက်တံဆိပ်တုံးထု ပြီးရင်ပြန်ထွက်လို့ရပါတယ်။
စာအုပ်အနီသမားကတော့ တရုပ်ပြည်ဘက်ကထွက်တာနဲ့မြန်မာပြည်ဘက်ကို အ၀င်တံဆိပ်တုံးထုပေါ့။
တစ်ပါတ်နေခွင့်ကဒ်ကိုင်သူများကတော့ အထွက်မှာ မြန်မာလ၀က ကို ကဒ်အစိမ်းလေး ပြန်အပ်ခဲ့ရပါတယ်။
(အဲဒီကဒ်ကိုမအပ်ဘဲလွှင့်ပစ်ခဲ့ရင် တရားဥပဒေအရ အရေးယူနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်)
ပြန်ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အ၀င်ပေါက်မှာ ပြန်တန်းစီ
တကယ်လို့များ မှတ်ပုံတင် မပါခဲ့ရင်ရောလို့မေးရင်
ကဒ်အစိမ်းရှိ မှတ်ပုံတင် မပါ ပြန်ဝင်ဘို့ ၀င်ခွင့်ကဒ်ပြား ပြန်လုပ်မယ်ဆိုရင်
ငွေပေးရင် ကိုယ့် အမျုိး ကိုယ်ပြန်စောင့်ရှောက်ပေးတတ်တာဂုဏ်ယူစရာပါဘဲ။
တကယ်လို့များကိုယ်က ဒီမှာ အမြဲအလုပ်လုပ်မယ့်သူ
နေ့တိုင်းဝင်ချီထွက်ချီ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ စာအုပ်အနီလုပ်ထားရင်ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်းစာအုပ်အနီပေါ်မှာ “၀န်ထမ်းမဟုတ်”လို့ အတိအကျရိုက်ပေးထားပါတယ်။
စာအုပ်အနီကလည်း ကဒ်အစိမ်း လို တစ်ပါတ်ဘဲနေထိုင်ခွင့်ရပါတယ်။
သူကတော့ သက်တမ်း တစ်နှစ်ပေးထားပါတယ်။
သူကလဲ စာအုပ်ကုန်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ် သက်တမ်းပြည့်ရင်ဖြစ်ဖြစ်
အမြဲနေထိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ စာအုပ်အစိမ်းကတော့ ပိုက်ဆံအတော်ကုန်မှရသလို
ဘာသာပြန်ရုံးကိုသွားပြီး ဘာသာပြန်ခိုင်း ဖောင်ဖြည့်ခိုင်းရတယ်။
ပြီးရင်ဆေးစစ်ရမယ် အဆင့်ဆင့်လုပ်ရတော့ နည်းနည်းကြာတော့လူတိုင်းလဲမလုပ်နိုင်ပါဘူး။
တရုပ်ပြည်ထဲကနေ မြန်မာပြည်ဘက်ထွက်မယ်ဆိုရင် မြန်မာလ၀ကမှာတံဆိပ်တုံးဝင်ထုသွား။
ပြန်ဝင်မယ်ဆိုမြန်မာလ၀က ဘက် မှာအ ၀င်တံဆိပ်တုံးထု ရင် မြန်မာငွေ ကျပ်သုံးရာပေးရပါတယ်။
တစ်ခါထွက်ပြီး တစ်ခါပြန်ဝင်တိုင်း မြန်မာငွေ သုံးရာကျပ်ပေးရပါတယ်။
တစ်နေ့တစ်နေ့ မြန်မာဘက်ကနေတရုပ်ဘက်ကိုလူထောင် ချီပြီး ၀င်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ကျပ်သုံးရာကောက်တဲ့နေရာမှာတော့ ကွန်ပြူတာနဲ့ မကိုင်ဘဲ စာရင်းစာအုပ်အရှည်နဲ့ဘဲ
အခုချိန်ထိစာအုပ်နဲ့စာရင်းမှတ်နေတယ် ဆိုတာက အတော်ကို ရင်ခံစရာကောင်းလှပါတယ်။
တကယ်လို့များ စာအုပ်အနီသမားလဲရက်ကျော်သွားခဲ့ရင် ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးတတ်တာကတော့
မတော်လို့များ ရက်လွန်အောင်နေတယ် စည်းကမ်းဖောက်တယ်ဆိုပြီး
ခေါ် ထားရင် အခက်သားလား။
တရုပ်ပြည်ထဲ ကို ၀င်ချိန်ထွက်ချိန် သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။
တရုပ်စံတော်ချိန်က မြန်မာစံတော်ချိန်ထက် တစ်နာရီခွဲစောပါတယ်။
မနက်ဆိုရင် တရုပ်နာရီ ရနာရီခွဲမှာဖွင့်ပေးပါမယ်။
ပိတ်ချိန်ကတော့ တရုပ်ည ကိုးနာရီ ခွဲ(မြန်မာဆယ်နာရီ)အထိရပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံ ၀င်သူထွက်သူ မရှိရင်တော့ စောပိတ်တတ်ပါတယ်။
မူဆယ်ကို အိပ်စ်ပရက်ကားကြီးနဲ့မန်းလေးက လာရင် ဒီကိုနောက်နေ့မနက်ရောက်တော့
၀င်ဘို့ အတွက်ပြဿနာမရှိပေမယ့် ကားအသေးနဲ့မနက်မှလာသူအဘို့ကတော့ တစ်ခါ တစ်ခါ
မြန်မာလ၀က ရဲ့ ကဒ်အစိမ်းထုတ်ပေးချိန်ကို မမှီတတ်ပါဘူး။
အဲလို ကူညီစောင်မ မယ်သူ့ မရှိရင်တော့”ခိုးပေါက်”ကို အားကိုးရပါတော့တယ်။
မြစပဲရိုး says: စာအုပ်အနီ ဆိုတာ Passport မဟုတ်ဘူးပေါ့။
Passport မလိုဘဲ ဝင်လို့ ရတဲ့ သဘောလား ကပေါက်ကြီး။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုလတ်ရေ
ဒီအပေါက်က ၀င် ဒီအပေါက်ကထွက်ပါ
ပါတ်စ်ပို့ နဲ့လဲ ဒီအပေါက်က ၀င်လို့ မရပါ
ပါတ်စ်ပို့နဲ့ဆိုရင် ခွေးမိန် က သာ ၀င်လို့ရပါတယ်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: အမအေးရေ အမှတ် (ဂ)အထိရေးပြီး ပါပြီ ဆက်လဲရေးနေပါတယ်
Mike says: .၀င်နည်းထွက်နည်းတွေသိထားတော့မရောက်ဖူးသေးတဲ့လူတွေအတွက်အသုံးတည့်လှပါတယ်..ကျေးကျေးပါ
တကယ်ကိုလွယ်ပါတယ် သုံးရက်လောက်နေမယ်ဆိုရင် လုံလောက်ပါတယ်
kai says: တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး…
အဲဒီ China ကို ဗမာတွေ တရုတ်ပြည်လို့ခေါ်…။
Chinese ကို ဗမာတွေ တရုတ်တွေလို့ခေါ်…
မြန်မာပြည်က တိုင်းရင်းသားတချို့တွေကို.. တရုတ်တွေလို့ အမည်တပ်…။
မြန်မာတွေဟာ.. ၀နယ်နဲ့ကိုးကန့်နယ်ကို..တပြားမှမရပဲ.. စိန့်ပြည်ကို.. ထိုးပေးနေသလိုခံစားရတယ်..။
ပြည်တွင်းမှာလည်း.. ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို.. တဖက်နိုင်ငံသားဖြစ်အောင်.. သွေးခွဲနေသလိုခံစားရတယ်…။
ဒီ.. စကားစကား ပြောပါများ.. သုံးပါများလာရင်… တနေ့… ဥပါဒါန်ကြောင့်..ဥပါဒ်ရောက်လိမ့်မယ်..။
၀နဲ့ကိုးကန့်နယ်ဟာ.. တလောက..ရုရှားသိမ်းလိုက်ပစ်လိုက်တဲ့.. ကရိုင်းမီးယားနဲ့.. အခု ခွဲထွက်ရေးသမားတွေသူပုန်ထနေတဲ့.. ယူကရိန်းပြည်လိုဖြစ်လာမယ်လို့.. အတတ်ပြောချင်မိ…။
၀နဲ့ကိုးကန့်နယ်ကို.. ဘယ်နိုင်ငံဖက်နေချင်သလည်း.. အဲဒီနယ်ထဲ..မဲခွဲကြတဲ့နေ့ရောက်လာမယ်.. ထင်နေမိ…။
စိန့်ပြည်ဟာ.. ချမ်းသာလာတာနဲ့အမျှ.. South China Sea ထဲက.. ကျွန်းလေးတွေတောင်..၀င်တန်းစီသိမ်းနေပြီ..။
ကိုပေါက်ရဲ့ပို့စ်နဲ့တော့မဆိုင်…။ စိတ်ထဲပေါ်လာတာလေး.. တင်ရေးထားတာ..။
kai says: Tatars – Wikipedia, the free encyclopedia
Eventually however, the name stuck onto the Turkic Muslims of Ukraine and Russia, …. to OED “said to be” ultimately from tata,aname of the Mongols for themselves. …. The Crimean Tatars are subdivided into three sub-ethnic groups: the Tats …
The first Mongol invasion of Myanmar took place in 1277 and was famously described by Marco Polo.
Interestingly, most of the ‘Mongol’ army were actually Turkic forces, with men drawn from across Inner Asia. The commander, Nasir al-Din of Bokhara, was then Governor of Yunnan.
The Turkic presence along what is today the Myanmar-Yunnan border would last for generations. This is why the Burmese refer to people from China as ‘Turks’ (Taruk or Tarup).
ဗမာတွေ.. မွန်ဂိုတွေကို.. မွန်ဂို တာတာလို့ခေါ်ခဲ့တာ.. သမိုင်းကျမ်းတွေထဲဖတ်ဖူးတယ်..။
တကယ်လည်း.. တာတာဆိုတာ.. မွန်ဂိုရဲ့အထဲ..အင်မတန်စွမ်းတဲ့စစ်သည်တွေတမျိုးနွယ်..။
အခု.. ယူကရိန်းနိုင်ငံမှလည်း.. သူတို့ရှိတယ်..။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကိုခိုင်ရေ
ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ 1975 ခုနှစ်လောက်ကထင်ပါမယ်
ဆရာငြိမ်းကျော်ရေးခဲ့တဲ့ ၀တ္တုတွေထဲမှာ မြောက်အရပ်ကလာတဲ့ စိန တွေ လို့ သုံးစွဲခဲ့ဘူးပါတယ်။
အဲဒီအချိန်ကတည်းကမြန်မာပြည်ကိုစိမ့်ဝင်လာမယ့် အရေး ကို ဆရာငြိမ်းကျော်က ကြိုမြင်လာခဲပါတယ်။
အခုကျယ်ခေါင်ထဲမှာရောေ၇ွှလီထဲမှာ ရှမ်းရွာဆိုတဲ့ ရွာလေးတွေရှိပါတယ်။
ရွှေလီနဲ့မူဆယ်ကြားမှာ ဟိုးအရင်က ရှမ်းလူမျိုးတွေနေတဲ့ရွာလေးတွေရှိပါသတဲ့။
မြန်မာစကားမတတ် ရှမ်းစကားနဲ့ တရုတ်စကားဘဲတတ်ပါသတဲ့။
မြန်မာနဲ့တရုတ်ပြည်နယ်ခြားသတ်မှတ်ပြီးချိန်မှာ တရုတ်ဘက်ကို နေချင်သူနေ
မြန်မာဘက်ပြောင်းချင်သူပြောင်းဆိုပြီး ခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့အခါ မြန်မာဘက်ကို တော်တော်များများရောက်လာပါသတဲ့။
အဲဒီအချိန်တရုတ်ပြည်က ကွန်မြူနစ် ဘုံလယ်ယာမြေစနစ်ဆိုတော့ ပင်ပန်းဆင်းရဲပါသတဲ့။
ကိုးကန့် တွေ ၀ တွေ က မြန်မာလူမျိုးတဲ့ ပါတယ်ဆိုပေမယ့် ရှေးကတည်းက မြန်မာစကားမပြောဘဲတရုတ်စကားနဲ့
ဒီနယ်မြေတွေနဲ့ပါတ်သက်ရင် ကျနော်အမြင် ကတော့ တရုတ်က
နယ်မြေကို သိမ်းပိုက်မှာမဟုတ်ဘဲ သူ့ လူကိုယ့်ဘက်သားဘဲ လုပ်နေမယ်ထင်ပါတယ်